सिडियो गेलालले एक्शस लिन नसक्दा बाँकेमा कोरोनाको चेन ब्रेक हुन सकेन् | Online Khoj Khabar
२ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:१८
कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले थल्लिएको बाँकेमा भाइरस संक्रमणको जोखिम अझै कायमै छ । संक्रमितको संख्या थपिनेक्रम रोकिएको छैन्। औषतमा दैनिक २० जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ । स्थानीय प्रशासनको निकम्वापनका कारण भाइरस संक्रमण फैलिएको बाँकेमा अझैपनि प्रशासनको चेत खुलेको छैन् ।
ढिलागरी लकडाउन गर्दा भाइरस संक्रमण भुसको आगो झै फैलियो । चिकित्सकहरुको सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाँकेका सिडियो शिवराम गेलालले ढिलाइ गर्दाको परिणाम आज बाँकेबासीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । अस्पतालका बेडहरु भरिएका छन्। अस्पतालहरुले सहज अक्सिजन सप्लाइ नगर्दा विरामीहरु छटपटाइरहेका छन्। भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न स्थानीय प्रशासनले बाँकेमा गएको १३ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो र अहिलेपनि जारी छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा त्यसको चार दिन अघि नै लकडाउन जारी गरिएको थियो । तर मानिसहरुको आवागमनलाई स्थानीय प्रशासनले रोक्न सकेको छैन् । दिनको समयमा केही कडा गरिएको भएपनि विहान र साँझको समयमा बजारमा मानिसहरु चहलपहल उस्तै छ । साना र निमुखा जनताहरुलाई लाठी लगाउने र हप्काउने प्रहरीले ठूलाबडा र पहुँचवालालाई भने निष्फ्रिकी बजारमा घुम्न दिएको छ ।
नेपालगन्जको चहलपहल हेर्दा कोरोना छ र ? भन्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । व्यापार व्यवसायलाई चौपट् पार्नेदेखि तल्लो तहका नागरिकहरुलाई दुख दिनु बाहेक स्थानीय प्रशासनले कोरोना भाइरस रोकथाम, निदान र नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । नत्र कडाइका साथ किन लकडाउन कार्यान्वयन गराउन स्थानीय प्रशासन सक्दैन् ? सिडियो गेलालले बाहिरको अवस्था बारे बुझेका छन् होला की छैनन् ? कि भित्र बसेर चम्चागिरीवालाको कुरा सुन्न व्यस्त होलान ? लकडाउनको तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि किन बाँकेमा भाइरस संक्रमणको चेन ब्रेक हुन सकेन ? अव बाँकेमा १५ दिन कडाइका साथ लकडाउन गर्न जरुरी छ। जहाँ मानिसहरुको आवागमन ठप्प होस् ।
घरभित्रबाट बाहिर निस्कनै दिनु भएन् । सेना र प्रहरी परिचालन गर्नु पर्यो । गएको वर्ष नरैनापुरमा भाइरस संक्रमणको तीब्र गतिमा फैलिदा सेना लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यही उपाय बाँकेमा अवलम्वन गर्न जरुरी छ । नत्र संक्रमण फैलिरहने छ । मानिसहरु मरिरहने छन् ।